IGrenada Underwater Sculpture Park iqeda ukulungisa
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeGrenada Breaking » IGrenada Underwater Sculpture Park iqeda ukulungisa
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Amasiko • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba zeGrenada Breaking • Izindaba • Abantu • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
IGrenada Underwater Sculpture Park iqeda ukulungisa.
Ukufakwa kufaka phakathi izithombe eziqoshiwe ezingu-82 ezinosayizi wempilo ezibonisa isiko laseGrenada futhi zenziwe ngezinhlobonhlobo zemidiya kodwa ikakhulukazi ezivela kuma-substrates alula kuhlanganise nokhonkolo. Bakha i-substrate ekahle, engaguquki futhi ehlala njalo, lapho impilo yasolwandle ingase ithuthuke khona.
I-Grenada Underwater Sculpture Park yavulwa ngo-2006 futhi yayingeyokuqala yalolu hlobo emhlabeni.
Leli paki labonwa umdwebi waseBrithani u-Jason deCaires Taylor futhi lifinyeleleka kubo bobabili abagibeli be-snorkelers nabatshuzi.
I-Grenada Underwater Sculpture Park iyigugu lesizwe futhi ukugcinwa kwayo kubalulekile ekugcineni ukuheheka okumsulwa kwamanzi aseGrenada.
IGrenada Tourism Authority (GTA) imemezele namuhla ukuthi iphrojekthi yokulungiswa kwe IGrenada Underwater Sculpture Park (USP), etholakala ngasogwini oluseNtshonalanga yeGrenada eMolinere Beauséjour Marine Protected Area, isiqediwe.
Njengoba ihlonishwa njengenye Yezimangaliso Eziphezulu Ezingu-25 Zomhlaba yiNational Geographic, leli paki labonwa umdwebi waseBrithani uJason deCaires Taylor futhi lifinyeleleka kubo bobabili abashushumbisi bezinhlanzi nabatshuzi. I IGrenada Underwater Sculpture Park yavulwa ngo-2006 futhi bekungeyokuqala yalolu hlobo emhlabeni. Isibe ngenye yezindawo ezithandwa kakhulu kule ndawo.
Ukufakwa kufaka phakathi izithombe ezingama-82 ezinosayizi wempilo ezibonisayo Grenadisiko lika-a futhi zenziwe ngezinhlobonhlobo zemidiya kodwa ikakhulukazi ngama-substrates alula afaka ukhonkolo. Bakha i-substrate ekahle, engaguquki futhi ehlala njalo, lapho impilo yasolwandle ingase ithuthuke khona.
Esinye sezithombe eziqoshiwe zaleli paki i-Vicissitudes, indingilizi enezibalo ezingu-28 ezivela ezinganeni zendawo zaseGrenadi ezixhunywe ukubambana ngezandla. Ezinye izingcezu eziphawulekayo zihlanganisa “Intatheli Elahlekile,” indoda esebenza kumshini wokubhala phezu kwedeski elimbozwe ngokusikwa kwamaphephandaba omlando; “Sienna,” isithombe esihle esibaziwe esiveza umfanekiso omuhle womtshuzi wesikhumba osemncane ovela endabeni yendawo ethandwa kakhulu; kanye “nobuso be-TAMCC,” uchungechunge lobuso obulingana nempilo obubonakala bulolongekile emfantwini wetshe elikhulu lamakhorali elibandakanya abafundi bekolishi lomphakathi lendawo.
Ngokuhamba kwesikhathi, ipaki yezithombe iye yathinteka amandla emvelo emvelo. Ngakho ukuze kulondolozwe ubuqotho bayo, imizamo yokubuyisela yaqalwa ukuze kugcinwe ukufaneleka kwemvelo kanye negalelo ezilwaneni eziningi zasolwandle ezilethwayo. Le mizamo ibihluka kusukela ekulungiseni nasekuhlanzeni izakhiwo ezithile kuya ekususeni nasekuthutheni ezinye.
"The IGrenada Underwater Sculpture Park iyigugu lesizwe futhi ukugcinwa kwayo kubalulekile ukuze kugcinwe ukuheha okumsulwa Grenadaemanzini,” kusho uPetra Roach, oyi-CEO, iGrenada Tourism Authority. “Iklanywe ngendlela emisha ukusebenza njengetshe lokwenziwa, leli paki lihehe izinhlobonhlobo zezilwane zasolwandle endaweni kusukela lafakwa futhi lanikeza indawo ukuze amakhorali akhule - okubalulekile ekugcineni emizamweni yethu eqhubekayo yokonga nokuzibophezela ekulweni nolwandle. umonakalo wokufudumala kwembulunga yonke. Thina ku-Grenada Tourism Authority sizoqhubeka nokumela kanye nokweseka amaphrojekthi anjalo ukuze siqinisekise ukusebenza kahle kwendawo okuyiwa kuyo kanye nemizamo eqhubekayo.”